Akụkọ - Ahịa ala plastik nwere ọdịnihu dị mma
Ahịa ala plastik nwere ọdịnihu dị mma
Ala plastik dị ugbu a bụ ihe eji emebe ihe ọkụkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ dị elu n'ihe ihe owuwu ụwa. Kemgbe ewebatala plastik n'ala anyị, ọ bụ afọ ise ma ọ bụ isii nke mmepe. A na -atụ anya na afọ ole na ole sochirinụ ga -abanye n'oge mmepe ngwa ngwa.
Plastic flooring bụ ugbu a ihe ọhụrụ dị elu na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gburugburu ebe obibi na-eme ka ihe owuwu ụwa. A na -eji ya eme ihe na mba ofesi mma mma. Ugbu a azụmahịa (nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu), agụmakwụkwọ (ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ebe mgbatị ahụ, ọba akwụkwọ), ọgwụ (ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ ọgwụ), ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na -ejikarị eme ihe, wee nweta nsonaazụ na -eju afọ, ego nke ojiji na -abawanye kwa ụbọchị. Ọganihu ngwa ngwa ya abụghị naanị maka ịtụle nchedo gburugburu ebe obibi na nchedo gburugburu ebe obibi, kamakwa maka imeziwanye teknụzụ mmepụta, ogo ngwaahịa na ndụ ọrụ na usoro mmepụta ngwaahịa plastik. Nke a kwesịkwara ịbụ n'ihi mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke plastik. Pụtara.
Nnyocha ahịa na akụkọ nyocha nke ụlọ ọrụ plastik na -egosi na e nwere ụdị PVC atọ: ala mkpuchi PVC, akwa mpempe akwụkwọ PVC, na ala mpempe akwụkwọ PVC. Ike imepụta ala rọba PVC bụ ihe dịka nde abụọ. N’afọ 2016, ọ rụpụtara mmepụta na ahịa zuru oke. Mgbe mmepe ahịa na 2015, ụkpụrụ Europe na ụkpụrụ America emechala asambodo. Site na ezigbo nchedo gburugburu ebe obibi, ọ na-anọchikarị ihe mejupụtara etiti ruo na elu. N'ala ala, ngwaahịa ndị dị ugbu a na-eburu n'uche mbupụ.
Site na mmụba nke teknụzụ mmepụta na njikarịcha nke usoro ahụ, ala plastik abụrụla onye nwe uru arụmọrụ. Nke ahụ bụ, uru nke ịkwa akwa plastik n'ọdịnihu ga -abawanye. Uru nke ihe eji achọ mma lekọtara ọnụ.
N'oge a, ala plastik bụ ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị elu na ihe eji eme ụlọ. Otu ụlọ ọrụ nyocha na nnwale ndị ọzọ ama ama nke ụlọ kwuru na ọ ga-enye teknụzụ nyocha dị elu egwuregwu zuru oke iji nye nkwa dị mma na ntụkwasị obi maka ịdị mma na nchekwa nke ala plastik. Ụzọ ọhụrụ.
Post oge: 04-06-21